Qarax aad u xoogan oo goordhaw ka dhacay Muqdisho +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qarax aad u xoogan oo goordhaw ka dhacay Muqdisho +Sawirro
Gaari Caasi ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa duhurnimadii maanta lagu weeraray xarunta Degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, waxaana qaraxan ka dhashay Khsaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sida aan wararka ku helnay qaraxa waxaa fuliyay ruux naftiis hure ah oo watay gaari Caasi ah oo dusha sare laga soo saaray Qudaar balse gudaha looga soo buuxiyay waxaabaha qarxa, waxaana gaariga uu ku qarxa albaabka laga galo xaruna Degmada .
Qaraxan waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab iyo askar ku sugnaa xarunta Degmada Wadajir, waxaa sidoo kale Qaraxa waxyeelo kasoo gaartay dad ku sugnaa Suuqa Weyn ee Madiina oo aad ugu dhaw xarunta Degmada.
In ka badan 10-qof oo u badan dad shacab ah ayaa ku dhintay qaraxan ismiidaaminta ah ee ka dhacay xarunta Degmada Wadajir , waxaa dadka dhintay ku jiray haween ku sugnaa agagaarka xarunta Degmada ee la weeraray.
Wararka kale oo Wardoon.net heleyso ayaa sheegaya in qaraxan ay ku dhaawacmeen Guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar C/llaahi Xasan , Xoghayaha Degmada iyo Masuuliyiin kale oo katirsan maamulka Wadajir kuwaa oo dhaawacooda lagu daweenayo xarumaha Caafimaadka Muqdisho.
Dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxan ayaa la geeyay isbitaalo kuyaala magaalada Muqdisho gaar ahaan Isbitaalka Madiina, waxaana halka uu qaraxu ka dhacay buux dhaafiyay ciidamo katirsan laamaha amaanka dowlada Soomaaliya.
Laamaha amaanka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaan wali faah faahin badan ka bixin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxan xoogan ee lagu weeraray xarunta Degmada Wadajir, waxaana goob joogayaal kusoo waramayaan in qaraxu uu waxyeelo xoogan geestay.
Al Shabaab ayaa durba dusha saaratay masuuliyada qaraxan xoogan ee lagu weeraray xarunta Degmada Wadajir, waxa ayna Al Shabaab sheegeen xaruna degmada xiliga la weerarayaay ku shirsanaayeen maamulka Degmada iyo Saraakiil katirsan Nabad sugida.